a - TECHNOMANIAC's - BLOG: Nargis News, Facts - Sources
a - TECHNOMANIAC's - BLOG
Reviews, critics, news on technology
Nargis News, Facts - Sources
နာဂစ် ဆိုးရွားချက်က အသောမသတ်နိုင်အောင်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ဘယ်လိုမှစိတ်မအေးနိုင်ဘဲ နေ့စဉ်ရက်ဆက်ပူပင်နေရပါတယ်။ သတင်းမီဒီယာတွေ အင်မတန်ပြန့်နှံ့နေပြီး ဖတ်စရာသတင်းလေးတွေရှိတာကိုတော့ ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။ ကွန်ပျူတာသမားမဟုတ်သော၊ သတင်းတွေရှုပ်လွန်းလို့ ဘယ်ကဖတ်ရမှန်းမသိ စိတ်ညစ်နေသော အကိုတို့အမတို့ အများဆုံး သတင်းတွေရနိုင်တဲ့နေရာတွေ ပြောရမယ်ဆိုရင် -
1# Twitter - သင့်အကောင့်၁ခုကို အခုချက်ခြင်း ဖရီးသွားယူလိုက်ပါတော့။ ပြီးရင်၊ ဂျီတော့ခ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် Twitter bot ထည့်ပြီး "Track burma","Track Myanmar","Track Nargis" လုပ်ထားလိုက်ပါ။ မြန်မာသတင်း၊ နာဂစ်သတင်း၊ အကုန်တွေ့ရမှာပါ။ မိနစ်ပိုင်းအမျှ ချက်ခြင်း အပ်တူဒိတ်ဖြစ်နေပါတယ်။
2# Google News - ပြောစရာမလိုပါဘူး၊ သူလည်း အပ်ပဒိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ Twitter မလုပ်ချင်သေးရင်၊ အဲ့ဒီမှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
3# Channel News Aisa မြန်မာအတွက် သီးသန့် follow လုပ်နေတဲ့ ဆိုင်ကလုန်း စာမျက်နှာပါ။ အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
4# AP.org , Reuters.com အစရှိတဲ့ သတင်းဌာနကြီးတွေလည်း စိတ်ချရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ personally ယူကေ သတင်းဌာနတွေဖြစ်တဲ့ Sun, Daily Telegraph, Mail တို့ကို မယုံပါဘူး =) ခဏခဏ ယုန်တောင်ပြေး ခွေးမြောက်လိုက် တလွဲတွေကြီး ပြောနေလို့ပါ။ အင်း.. ဒီလောက ကလည်း ဒီလိုပါပဲဗျာ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် twitter မှာစောင့်ကြည့်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး၊ မျက်စိ နောက်မခံနိုင်တဲ့လူတွေကတော့ သပ်သပ်ရပ်ရပ် #2,#3,#4 နေရာတွေမှာ စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ တတ်နိုင်သလောက် ကူညီတာပါဗျိုး။ Volunteer အလုပ်တွေလည်း စီစဉ်နေပါတယ်။ မောင်သန့်ဇင်တို့နှင့်။
Posted by Wai Phyo at11:25 AM
Link Me In
Hi there. I write about technology and eBusiness. After publishing for more than3years here, I have moved my blog to www.waiphyok.com. I am the creator of first Zawgyi Keyboard for Mac OS while my latest endeavors include TerraSquare and MyanmarCarsDB among others.
iPhone SG Love - Singtel is Shaking Apple Tree
DBS Singapore - iBanking Nargis Appeal
Nargis devastated Yangon - Damn!
Ko Wai Yan Lin
Myat Min Han
Nyi Nyi Thanlwin
Zin Co Latt